Itshathi yeChitare eChongiweyo - Guitar Music
Itshathi yeChitare eChongiweyo
Ngaba ukhe wafuna ukudlala ikhetshi ethile kwaye ngesiquphe uzobe engenanto malunga nokuchana ngqo kwayo? Kwenzeka phantse kuwo wonke umdlali ngexesha elithile. Mhlawumbi usebenza ingoma ngexesha lokuziqhelanisa nebhendi yakho xa umntu othile ecebisa enye indlela, kwaye ayisiyiyo oyaziyo. Ingaba wenza ntoni?
onke ama-50 athi kunye nezihloko
Itshathi yeGitare eprintiweyo
Ngokusisiseko, itshathi nganye nganye yesingqi esithile ibonisa ukuba yeyiphi imitya kunye noxinzelelo ukuze ucinezele iminwe yakho. Yinike nje umtya kwaye unayo i-chord yakho. Ubuhle bokuba nokufikelela kwiitshathi zokuprinta zegitare unokugcina ikopi enye ekhaya kwaye ugcine enye ikopi kwimeko yakho yegitala ukuba kunokwenzeka uyifumane. Ootitshala banokuprinta ezi tshathi kwaye banike ikopi kubo bonke abafundi abatsha.
UkuQeqesha okuQhelekileyo kweJazz Chord
Abadlali beBass Guitar abadumileyo
Imitya yeGitala epholileyo yayo nayiphi na iGuitarist
Cofa kumfanekiso ongezantsi, kwaye uya kukukhokelela kwitshathi yekatala ye-PDF ukuba ukhululekile ukuprinta. Le yitshathi ebanzi engaphezulu kwe-126 yemizobo yeqhosha ngalinye elinamakhonkco kuzo zonke izitshixo. Ukuba ufuna uncedo lokukhuphela okuprintwayo, jonga eziiingcebiso eziluncedo.
Ukufikelela ngokulula kwiiGuitar Chords
Qiniseka ukuba ubhukumaka eli phepha kwaye wabelana ngalo nabanye abahlobo bakho abadlala isiginkci. Iya kuvumela ukufikelela ngokulula kuzo zonke ikatala ozifunayo.
Amakhonkco Omtshato Isidanga Se-Intanethi Nkulu Njengendoda Mnyama Impahla Iimidlalo Yevidiyo Ukucoca Imiboniso Yeslides
indlela yokwenza inkqubo yokuhluza amanzi
Kutheni abafana bengahoyi xa bekuthanda
Buphi ubushushu obupheka i-steak ehovini
indlela yokufumana deodorant ngaphandle kwehempe
ungawucoca njani umgangatho weenkuni ngeviniga